Obiọma Chineke: Ọ Na-enye Anyị Nri | Bịaruo Chineke Nso
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Macua Malagasy Maya Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Jehova ọ̀ na-eche banyere anyị n’eziokwu, ka ọ̀ bụ na ọ chọghị ịma banyere ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata? Otú Baịbụl si zaa ajụjụ a na-eme ka obi tọọ anyị ụtọ. Chineke na-eche banyere ụmụ mmadụ. Ọ chọkwara ka anyị na-enwe obi ụtọ ná ndụ. Kwa ụbọchị, Chineke na-emere mmadụ niile ọtụtụ ihe ọma, ma ndị na-achọdịghị ife ya. Ka anyị leba anya n’ihe Pọl onyeozi kwuru.—Gụọ Ọrụ Ndịozi 14:16, 17.
Mgbe Pọl na-agwa ndị Listra okwu, bụ́ ndị na-anaghị efe Chineke, ọ sịrị ha: “N’ọgbọ ndị gara aga, [Chineke] kwere ka ndị mba ọzọ niile nọgide na-eje ije n’ụzọ ha, ọ bụ ezie na ọ hapụghị onwe ya n’enweghị ihe àmà, ebe o mere ihe ọma, na-enye unu mmiri ozuzo site n’eluigwe, na oge mkpụrụ ji amị, na-enyekwa unu nri n’ụba, na-emekwa ka unu nwee obi ụtọ.” Olee ihe ndị Listra ghọtara Pọl na-ekwu?
Ndị Listra ma na ihe a Pọl kwuru bụ eziokwu. Ha bụ ndị ọrụ ubi, ala ha na-emekwa nri nke ọma n’ihi na mmiri na-ede ala ha. Ma, Pọl chetaara ha na ọ bụ Chineke na-eme ka mmiri na-ezo, na-emekwa ka mkpụrụ na-amị. Ihe Pọl na-ekwu bụ na mgbe ọ bụla ha wetara ihe ha kụrụ n’ubi ma rie ezigbo nri, ọ bụ Chineke nyere ha ya.
lhe Pọl gwara ndị Listra na-akụziri anyị ọtụtụ ihe banyere Jehova Chineke.
Jehova kere anyị ka anyị jiri aka anyị na-ekpebi ihe anyị ga-eme. Buru n’obi na Jehova kwere ka ndị Jentaịl “na-eje ije n’ụzọ ha.” Otu akwụkwọ nke na-enyere ndị na-asụgharị Baịbụl aka kwuru na ihe ihe a Pọl kwuru, ya bụ, ‘ka ha na-eje ije n’ụzọ ha’ pụtara bụ “ka ha na-eme otú masịrị ha” ma ọ bụ “ka ha na-eme ihe ọ bụla ha chere dị ha mma.” Jehova enweghị onye ọ na-amanye ka o fee ya. O kere anyị ka anyị jiri aka anyị na-ahọrọ ihe anyị ga-eme, ya bụ, ka anyị họrọ ụdị ndụ anyị ga-ebi.—Diuterọnọmi 30:19.
Jehova chọrọ ka anyị mata onye ọ bụ. Pọl kwuru na Jehova ahapụghị “onwe ya n’enweghị ihe àmà.” Akwụkwọ ahụ na-enyere ndị na-asụgharị Baịbụl aka kwuru na otú ọzọ e nwere ike isi sụgharịa ihe a Pọl kwuru bụ “o meela ka ndị mmadụ ghọtazie ụdị Chineke ọ bụ.” Ihe ndị Chineke kere na-eme ka anyị mata “àgwà ya ndị a na-apụghị ịhụ anya,” ya bụ, obiọma ya, amamihe ya, ike ya na ịhụnanya ya. (Ndị Rom 1:20) Jehova emeela ka anyị mata ọtụtụ ihe banyere onwe ya na Baịbụl. (2 Timoti 3:16, 17) Nke a ó gosighị na Chineke chọrọ ka anyị mata onye ọ bụ?
Kwa ụbọchị, Chineke na-emere mmadụ niile ọtụtụ ihe ọma, ma ndị na-achọdịghị ife ya
Jehova chọrọ ka anyị na-enwe obi ụtọ. Pọl kwuru na Chineke ‘na-enye anyị nri n’ụba, na-emekwa ka anyị nwee obi ụtọ.’ Onye ajọ omume nke na-ekwedịghị na Jehova dị nwedịrị ike iriju nri afọ ma nwetatụ obi ụtọ ná ndụ. Ma, Chineke chọrọ ka anyị na-enwe ezigbo obi ụtọ mgbe niile. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịna-enwe ụdị obi ụtọ a, anyị kwesịrị ịmụta eziokwu banyere Chineke ma na-emekwa ihe anyị mụtara.—Abụ Ọma 144:15; Matiu 5:3.
Jehova na-emere anyị ihe ọma kwa ụbọchị. Ọ́ gaghị adị mma ka ị mụtakwuo otú i nwere ike isi na-ekele Chineke bụ́ ‘onye na-enye anyị nri n’ụba, na-emekwa ka anyị nwee obi ụtọ’?
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na Baịbụl n’ọnwa Julaị:
Ọrụ Ndịozi 11-28
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ ‘Na-enye Anyị Nri n’Ụba’
Chineke ‘Na-enye Anyị Nri n’Ụba’